”Maxaa Kenya ka galay Jubbaland!” – MW Farmaajo oo sheegay inay jiraan 2 maamul-goboleed oo ay shisheeyuhu adeegsanayaan! | Hadalsame Media
Home Wararka ”Maxaa Kenya ka galay Jubbaland!” – MW Farmaajo oo sheegay inay jiraan...
”Maxaa Kenya ka galay Jubbaland!” – MW Farmaajo oo sheegay inay jiraan 2 maamul-goboleed oo ay shisheeyuhu adeegsanayaan!
(Muqdisho) 14 Feb 2020 – MW DF Somalia, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Wareysi gaar ah siinayay TV Universal ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah, gaar ahaan ciidamada dowladdu ay geysay gobolka Gedo, fara-galinta Kenya iyo waliba doorashadii ka dhacday Jubbaland.
MW Farmaajo ayaa tilmaamay in DF Somalia ay tahay cidda qura ee wax laga waydiinayo guud ahaan mas’uuliyadda iyo amniga dalka iyo difaaca xudduudaha isaga oo ku eedeeyay dowladda Kenya in ay fara gelin gaar ah ku heyso qeybo ka mid ah geyiga Somalia.
”Kenya maxaa ka galay Jubbaland, waxba kama gelin faragalinna kuma sameyn karto, arrin ayaa naga dhaxeysa badda ah waadna ogtihiin inay arintaa meel walba u mareyso siddii ay saameyn ugu yeelan laheyd, gaar ahaan Jubbaland oo ay dooneyso in ay gaashaan ka dhiggato’’ ayuu yiri MW Farmaajo.
Wuxuu intaa daba dhigay in marnaba aanay DF Somalia raali ka aheyn in ay Jubbaland u ekaato meel loo isticmaalayo burburinta dowladda iyo dhibaateynta Somalia.
”Qof kasta oo rabitaanka noocaa ah aqbalsan waxaan u arkeynaa qof aan danta Somalia ka shaqeyneynin,” ayuu raaciyey MW Farmaajo.
MW Farmaajo ayaa tilmaamay in dalalka Somalia faragelin jirey ay haatan u weecdeen dhanka adeegsiga maamul-goboleedyada, kaddib markii ay ku fashilmeen inay ka dhex kalluumaystaan Madaxwaynaha iyo Raysal Wasaaraha.
”Dowlad gobolleedyada oo idil ma aha, balse mid iyo laba ayaa la dhihi karaa, gaar ahaan Jubbaland oo ayaan wali annagu aqoonsanayn doorashadii ka dhacday,’’ ayuu carrabka ku adkeeyay MW Farmaajo.
Previous articleLaacib reer Hargaysa ah oo ku biiraya koox ka dhisan Muqdisho
Next article”Dooni mayno raalli gelin QALLALAN!” – Siyaasi Somaliland ah oo afka ku dhuftay dalab aan horay looga maqli jirin siyaasiyiinta dhankaas! (Waa maxay?)